Budada Spermidine - Wisepowder
Jeermiska Qamadiga wuxuu soosaaraa budada （Spermidine）
Powder Spermidine: Miyuu U Qalmaa Hype?
Jidhka bani -aadamku wuxuu ka kooban yahay xubno iyo unugyo, kuwaas oo iyaguna ka kooban unugyo shaqaynaya oo jidhka ah, kuwaas oo ah unugyo. Ku dhowaad geeddi -socod kasta oo bayooloji ah ayaa la sameeyaa oo lagu hayaa heerka gacanta, natiijooyinka kuwaanna waxaa lagu qiyaasaa unugyada iyo xubnaha. Laga bilaabo unugyada asliga ah, unugyada bini'aadamka inta lagu guda jiro geeddi -socodka horumarka inta lagu jiro xilliga uurjiifka waxay ku kala duwan yihiin unugyo kala duwan oo u hayaamaya qaybaha kala duwan ee jirka oo u fuliya hawlo kala duwan si waafaqsan.
Unugyadu waxay qabtaan hawlo kala duwan sida dheef -shiid kiimikaad iyo homeostasis, si kastaba ha ahaatee, iyagu ma awoodaan inay sidaas sameeyaan oo waxay u baahan yihiin kiimikooyin kala duwan, enzymes, iyo isku -darka calaamadaha si ay uga caawiso inay gaaraan natiijooyinka la rabo.
Noocyada kala duwan ee unugyadu waxay leeyihiin cimri nololeed oo kala duwan oo markay dhammaystaan ​​muddadaas, waxay galaan gabowga ama gabowga, noocyadiisa kala duwan, ka dib waa la jebiyaa ama la xumeeyaa, oo calaamad u noqda dhammaadka noloshooda.
Markay da'du timaaddo, hawlaha gacanta ayaa marka hore la beddelaa, taasoo keenta astaamaha jirka ee gabowga, ugu dambayn. Si kastaba ha noqotee, noocyo badan oo cilmi -baaris ayaa la sameeyay si loo barto loona fahmo sida loo kordhiyo cimriga unugyada iyo sida ugu dambaysa, aadanaha. Natiijooyinka daraasaddan awgeed, waxaa la helay wakiil cimri -dherer kaas oo sidoo kale dhaca inuu noqdo mid ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee muhiimka u ah dayactirka shaqooyinka kala duwan ee unugyada. Isku -dhafkan waxaa laga helaa jirka aadanaha oo aad u badan waxaana lagu magacaabaa spermidine.
Hagaajinta caafimaadka aadanaha iyo kor u qaadista cimriga sii kordhaya ee unugyada, sidaas darteedna, aadanaha, ayaa ah shaqada ugu weyn ee dhismahan, in kasta oo ay ka qaybqaadato falcelinta kiimikada iyo dheef -shiid kiimikaadka kala duwan ee jirka.
Waa maxay budada Spermidine?
Spermidine waa polyamine dabiici ahaan loo helay oo muhiim u ah shaqada caadiga ah ee jirka oo dhan. In kasta oo aysan si dhab ah door ugu lahayn dayactirka ama soo -saarista shahwada, haddana waxaa loogu yeeraa xarunta shahwada maxaa yeelay markii hore waxaa laga helay shahwada. Waxaa lagu dhexsameeyay jirka bini'aadamka iyada oo loo marayo ficillada enzyme, synthase spermidine ee xarunta, putrescine.
Spermidine waxaa loo sii burburin karaa shahwada, iyo polyamines kale, oo ay ku jiraan isomer -ka dhismaha ee shahwada, thermospermine. Waxaa laga helay ribosomes -ka unugga, shaqada ugu weyn ee dhismahan waa in kor loo qaado autophagy taas oo u oggolaanaysa cusboonaysiinta unugyada inay ka dhacdo jirka aadanaha. Waxay awood u leedahay inay qabato shaqooyinkan iyada oo ku kicineysa autophagy heerka unugga ee jirka, halkii ay ka ahaan lahayd heerar sare.
Marka la eego doorka weyn ee spermidine ku leedahay jirka, maareynta heerarka caadiga ah waa inay noqotaa mid muhiim ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa la ogaaday in heerarka Spermidine ee jirka ay bilaabaan inay hoos u dhacaan hal sano, taas oo yareyn karta kartida ay u leeyihiin howlaha dheef -shiid kiimikaadka kala duwan. Waxaas oo dhami waxay keenaan hoos u dhaca awoodaha jidhka bini'aadamka oo sida caadiga ah lagu eedeeyo gabowga, laakiin si toos ah uma gabowdo taas oo keenta laakiin waxay ka dhalataa hoos u dhac ku yimaada xeryahooda muhiimka ah ee jirka bini'aadamka.
Budada Spermidine waa nooc ka baxsan Spermidine oo ujeedadeedu tahay in la buuxiyo bakhaarada jirka ee polyamine aliphatic oo kor loo qaado shaqada jirka.
Spermidine waxaa loogu magac daray sidaas oo kale waayo markii hore waxay ka go'day shahwada laakiin tan iyo markaas waxaa la ogaaday in si aad ah loogu qaybiyo jirka bini'aadamka waxayna ka ciyaartaa doorar kala duwan qaybaha kala duwan ee jirka. In kasta oo ay muhiim tahay in la xuso in ay leedahay hal shaqo oo ugu weyn jirka oo dhan taas oo ah faafinta unugyada iyo cusboonaysiinta, iyada oo kor u qaadaysa autophagy. Waa mid ka mid ah wakiilada ugu cimriga dheer aadanaha iyo naasleyda kale.
Wakiilka cimriga dheer waxaa markii hore laga helay shahwada aadanaha Antoni van Leeuwenhoek, sanadkii 1678 inkasta oo uu si fudud ugu tilmaamay inay tahay kiristaalo. Waxay ahayd ku dhawaad ​​200 sano ka dib markii la ogaaday in kiristaaloyinka uu arkay Leeuwenhoek ay ahaayeen xawada, beddelka Spermidine. Si kastaba ha ahaatee, qaab -dhismeedka kiimikada ee shahwada iyo shahwada weli lama oga mana ahayn ilaa 1924 -kii in la helay qaab -dhismeedka kiimikada si faahfaahsanna loo darsay.
Daraasad dheeri ah oo ku saabsan qaab dhismeedka shahwada ayaa shaaca ka qaaday wax badan oo ku saabsan shaqooyinkeeda iyo astaamaha gaarka ah ee jirka aadanaha. Waxaa la ogaaday in spermidine, sida polyamine kasta oo kale, ay tahay dhismo deggan oo aan ku milmin ama ka falcelin bay'adaha aashitada ama aasaasiga ah. Waxaa intaa dheer, spermidine waxaa lagu ogaadey inay leedahay lacag togan oo u oggolaaneysa inay ku xirto molecules si xun loo soo eedeeyay sida RNA iyo DNA.
Intaas waxaa sii dheer, Spermidine waxaa la ogaaday inay ku badan tahay jirka aadanaha, iyadoo heerarku bilaabeen inay hoos u dhacaan hal sano, isla waqtigaasna heerarka kolajka iyo elastin -na ay yaraadaan. Inta lagu jiro wajiga hore ee nolosha, bini'aadanku waxay ku helaan shahwada caanaha naaska ama caanaha ilmaha marka ay weynaadaan, waxay shahwada ka helaan ilo kala duwan oo cunto ah. Si kastaba ha ahaatee, ilaha dabiiciga ah ee spermidine kuma filna inay buuxiyaan bakhaarrada xarunta ee la faaruqinayo sababtuna tahay hoos u dhaca wax soo saarka polyamine.
Xaaladaha noocaas ah, dhowr nooc oo cilmi baaris ah ayaa la sameeyay si loo falanqeeyo sida bakhaarrada loo buuxin karo iyo Spermine supplements oo ay ku jiraan budada Spermidine trihydrochloride maadaama qayb firfircoon laga helay xalka dhibaatadan. Kaabisyada Spermidine hadda waa la heli karaa waxaana si ballaaran loo aqbalaa inay yihiin dheellitirka dheeraadka.
Shaqada Spermidine ee Jirka Aadanaha
Kaabayaasha Spermidine waxay ka ciyaaraan doorar la mid ah sida shahwada ay jirka ku yeelan lahayd taas oo ah sababta ay muhiim u tahay in la ogaado shaqooyinka muhiimka ah ee Spermidine ee jirka aadanaha. Spermidine waxaa loo arkaa inay muhiim u tahay ka hortagga neuronal nitric oxide synthase ama nNOS, in sida magacu tilmaamayo lagu muujiyo oo keliya neefaha durugsan iyo kuwa dhexe. Shaqada ugu weyn ee nNOS waa la socoshada iyo nidaaminta codka vasomotor iyo nidaaminta cadaadiska dhiigga ee dhexe oo ay weheliso dayactirka baaxadda synaptic ee neurons -ka dhexe.
Ka-hortagga nNOS ee labadaba shahwada 'endogenous spermidine' iyo 'spermidine exogenous' ayaa la rumeysan yahay inay leeyihiin saameyno neerfaha, oo ay ku jiraan saameynta ka-hortagga niyad-jabka. Intaa waxaa dheer, ka -hortagga nNOS ayaa mas'uul ka ah hoos u dhac weyn oo ku yimaada cilladaha muruqa iyo xumaanshaha neerfayaasha laf -dhabarka taasoo ka dhigaysa shaqadan spermidine inay noqoto hawl ilaalin ah.
Spermidine, oo ay weheliso polyamines kale, ayaa la muujiyey inay saamayn la mid ah ku leedahay wareegga unugga sida korriinnada oo waliba taageera shaqadiisa ugu weyn; autophagy iyo cimri dherer. Waxaa intaa dheer, spermidine waxay ku xirtaa xeryo kala duwan si ay u taageerto shaqooyinka kala duwan ee xarunta.
Isticmaalka Spermidine Powder
Budada Spermidine waxaa loo adeegsadaa kaabis si looga hortago noocyada kala duwan ee kansarka, gaar ahaan kansarka hepatocellular iyo fibrosis beerka. Dadka intooda badan waxay doortaan inay qaataan budada shahwada si ay u noqdaan kabitaan sababtoo ah awooddeeda ma aha oo kaliya inay hagaajiso cimri dhererka laakiin sidoo kale sababtoo ah saamaynta ka -hortagga ee xarunta.
Faa'iidooyinka Spermidine Powder oo ah Kaabis
Isticmaalka Spermidine oo ah kaabis ayaa dhawaan uun la hirgaliyay laakiin waxaa si weyn u taageeray cilmi baaris cilmiyeed oo lagu ogaaday in ay leedahay faa'iidooyin badan oo jirka aadanaha ah. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee budada shahwada sida kabitaan ayaa ah:
· Xusuusta oo la wanaajiyay iyo Shaqada Garashada oo la xoojiyay
Isticmaalka budada spermidine waxay la xiriirtaa guryaha neuroprotective inkasta oo aysan ahayn astaamaha ugu weyn ee mas'uul ka ah kor u kaca caannimada xarunta. Saamaynta togan ee Spermidine ee maskaxda iyo garashada ayaa ah natiijada ka-hortagga bararka ee horjoogsada bararka neurons-ka, sidaa darteed hoos u dhaca dhacdooyinka dhowr cudur oo neerfaha ah sida Cudurka Parkinson iyo Cudurka Alzheimers.
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa diiradda lagu saaray in la barto saamaynta polyamine -kan gaarka ah maadaama polyamines -ku yeelan karaan saamaynta neuroprotective iyo neurotoxic labadaba. Spermidine waxaa lagu baray moodooyinka xayawaanka leh cilladaha neurodegenerative, gaar ahaan neurodegeneration oo ka dhalatay cayda hypoxic-ischemic. Waxaa la ogaaday in aflagaadadani ay dhalisay caabuq iyada oo la yareeyay falalka nitric oxide ee maskaxda. Si kastaba ha noqotee, adeegsiga shahwada ayaa dhalisay barar hoos u dhacay markii la ogaaday inay kordhiso enzyme, nitric oxide synthase ee maskaxda taas oo muhiim u ah isku -darka nitric oxide, iyo aakhirka, daaweynta caabuqa. Daraasadani waxay caddeysay saamaynta ka-hortagga bararka ee shahwada iyo ku-xigeenkeeda, shahwada ee vivo ee moodooyinka xayawaanka.
Daraasad tan la mid ah ayaa lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka leh naafanimada mootada iyo hoos u dhaca heerarka dopamine, taasoo ka dhalatay soo -gaadhista rotenone. Soo -gaadhista Rotenone ee moodooyinkaan waxay keentaa cillado mooto oo la mid ah cilladaha mootada ee lagu arko dadka la ildaran cudurka Parkinson. Saynisyahannada daraasadda samaynaya waxay ogaadeen in spermidine ay leedahay astaamo antioxidant oo gacan ka geysta badbaadinta neerfayaasha dopaminergic ee ay saameeyeen rotenone ee jiirka halka ay sidoo kale la dagaallamayaan saamaynta cytokines proinflammatory iyo stress oksida. Cadaadisyadan waxay keenaan dhaawac soo gaadha neerfayaasha waxayna keenaan hoos u dhac ku yimaadda dareemayaasha gudbiya sida serotonin, norepinephrine, iyo dopamine.
Isticmaalka Spermidine wuxuu badbaadiyey neerfayaashaan qaababka xayawaanka wuxuuna beddelay cilladaha mootada ee ay sababtay soo -gaadhista rotenone, sidaa darteed, waxay caddaynaysaa mala -awaalka in spermidine leeyahay astaamaha neerfaha.
Sidoo kale, daraasad ayaa la sameeyay si loo falanqeeyo saamaynta shahwada cuntada ay ku leedahay shaqada garashada. Waa xaqiiqo la wada og yahay in gabowgu uu saamayn taban ku leeyahay shaqada garashada, si kastaba ha ahaatee, waxaa la qiyaasayaa in saameyntani ay ka hortagi karto adeegsiga kaabayaasha budada spermidine.
Markii la baranayay moodooyinka xayawaanka ee la siiyay dheecaanka spermidine, waxaa la ogaaday inay ka gudbi karto caqabad-maskaxeedka dhiigga waxayna kordhin kartaa shaqada hippocampal iyo shaqada mitokondrial ee maskaxda. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay maadaama hippocampus ay muhiim u tahay sameynta xusuusta iyo garashada, iyo hagaajinta shaqadeeda ayaa laga yaabaa inay si gaar ah faa'iido ugu leedahay la -dagaallanka jir -dhiska iyo bayooloji ee shaqada hippocampal.
Asal ahaan, spermidine waxay leedahay astaamaha anti-bararka iyo antioxidant-ka oo ay weheliso awoodda ay uga gudubto xannibaadda maskaxda-maskaxda taas oo u oggolaanaysa inay noqoto wakiilka neerfayaasha jirka jirka aadanaha.
· Guryaha La-Dagaalanka Gabowga oo leh Autophagy oo kordhay
Spermidine waa unug dabiici ah oo laga helo jirka bini'aadamka kaas oo kaalin muhiim ah ka qaata cimri dhererka unugyada. Waxay ku xidhan tahay DNA, RNA, iyo molecules kale oo si wanaagsan loo soo oogay taas oo u oggolaanaysa inay ka qayb qaadato habab badan oo dheef -shiid kiimikaad ah. Natiijooyinka habraacyadan ayaa ah koritaanka unugga oo kordhay, kororka unugyada, iyo ka-hortagga gabowga jirka. Si kastaba ha ahaatee, ma awoodo inay la dagaallanto saamaynta gabowga iyo dhimashada unuggu markay da 'ahaan jirto maxaa yeelay heerarka spermidine waxay bilaabaan inay hoos u dhacaan da'da dhexe.
Waayeelku waa geedi socod hidde ah oo kakan oo ku dhaca jawaabta walbahaarka iyo kicinta kala duwan taas oo sababi karta dhimashada unugga. Isticmaalka dheef-shiid kiimikaadka spermidine-ka cuntada ayaa la rumeysan yahay inay leedahay saameyn ka-hortagga gabowga jirka bini-aadamka iyada oo awood u leh inay kiciso autophagy. Si fudud haddii loo dhigo, autophagy waa hab gacanta ah, oo marka la turjumo macnaheedu yahay 'cunidda naftaada'. Nidaamkani wuxuu mas'uul ka yahay dheefshiidka xubnaha jirka iyo borotiinka aan shaqayn ama qalloocan, siday u kala horreeyaan, taasoo horseedaysa burburinta unugyada aan sii wadi karin hawlaha lagama maarmaanka ah. In kasta oo shaqadeedu u muuqato mid waxyeello leh, autophagy waxay saamayn difaac ku leedahay unugyada maadaama ay ka saarto unugyada aan waxtar lahayn.
Isticmaalka budada spermidine trihydrochloride waxay la xiriirtaa kororka autophagy ee jirka bini'aadamka kaas oo ka caawiya hababka ka-hortagga gabowga maadaama ay ka saarto unugyada aan shaqeynin, kor u qaadista soo-saarka unugyada cusub iyo kuwa shaqeynaya. Dib -u -soo -nooleynta gacanta ayaa muhiim u ah ka -hortagga unugyada aan shaqeynin inay ku sii jiraan jirka taasoo keenta saamayn la buunbuuniyey oo gabowga ah.
Kordhinta autophagy by budada spermidine ayaa sidoo kale door ka ciyaara nidaamka difaaca, gaar ahaan unugyada T. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in wakiilada kor u qaadista autophagy, sida spermidine, laga yaabo inay faa'iido u leedahay hagaajinta jawaabta bukaannada waayeelka ah ee tallaallada. Cilmi -baadhayaashu waxay hiigsanayaan inay xogtan u gudbiyaan xarumaha tallaalka waxayna rajaynayaan inay adeegsiga shahwada cuntada ka dhigaan borotokool guud oo loogu talagalay bukaannada waayeelka ah ee la tallaalo.
Marka laga reebo autophagy, spermidine sidoo kale waxay leedahay sifooyin gabowga ka-hortagga iyada oo ay sabab u tahay geedi socodyo kale oo gacan ka geysanaya joojinta lix ka mid ah sagaal astaamood ee gabowga jirka aadanaha. Markay da'du timaaddo, unugyada asliga ahi waxay lumiyaan awooddii ay ku kala sooci lahaayeen noocyo unug oo kala duwan oo dhintay, tahriibay, ama lumiyay awooddoodii wax -qabad. Tani waxay keentaa isbeddello aan laga soo kaban karin oo ku dhaca jidhka bini'aadamka sida cirrada timaha oo habka oo dhan waxaa lagu tilmaamaa daal unug unug. Tilmaamahan gabowga waxaa hor istaagay ama la dagaallamay dheef -shiid kiimikaadka cuntada ee dheeraadka ah kaas oo kordhin kara cimriga dheer ee unugyada asliga ah.
Isbeddelka Epigenetic waa astaan ​​kale oo gabow ah oo loola jeedo isbeddelada qaybaha hidde -wadaha ee unugga oo ay weheliso qaab dhismeedka unugyada iyo fiisigiska iyadoo ay ugu wacan tahay soo -gaadhista arrimo kala duwan oo deegaanka ah. Suntaas bay'adu waxay ku keentaa isbedelo ku dhaca unugyada sida xun u saameeya unugga oo sababa gabowga hore ee unugyada iyo aakhirka, dhimashada unugyada. Astaantan waxaa sidoo kale la dagaallama isticmaalka shahwada maadaama loo yaqaan kor u qaadista dib -u -nooleynta gacanta.
Markay da’du sii gabowdo, waxay inta badan tamartooda u jiheeyaan is-ilaalin taas oo horseedaysa is-beddel xagga isgaarsiinta ah oo ka-baxsan sida unuggu u dhaawici doono unugyo kale oo isku dayaya inay ilaashadaan caafimaadkiisa una kiciyaan cimri-dherer. Si kastaba ha ahaatee, tani, mustaqbalka fog, waxay yeelan kartaa saamayn sii xumaanaysa caafimaadka unugyada iyo xubnaha, taas oo ah raadinta soo noqnoqota ee shakhsiyaadka gaboobay. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka shahwada ayaa la rumeysan yahay inay yareynayso is -beddelka xiriirka u dhexeeya unugyada si kor loogu qaado cimri -dhererka dhammaan unugyada, iyada oo aan waxyeello u geysan unugyada kale ee nudaha.
Borotiinnadu waxay kaalin muhiim ah ku leeyihiin unugyada waxayna lagama maarmaan u yihiin dhammaan hababka dheef -shiid kiimikaadka si habboon loo fuliyo. Borotiinnada waxay u baahan yihiin in si habboon loogu dhiso jirka si loo hubiyo in si habboon u shaqeynta jirka oo ay weheliso dayactirka homeostasis. Markay da'du jirto, borotiinnadu waxay lumiyaan awooddii ay ku hayn lahaayeen qaab -dhismeedkooda gaarka ah kaas oo u oggolaanaya inay qabtaan shaqooyin gaar ah. Cadaadiska deegaanka ayaa saameeya borotiinkaan iyo farsamooyinka keenaya soo saarista iyo dayactirka dhismayaasha borotiinkan. Tan waxaa lagu tilmaamaa luminta proteostasis waana astaan ​​muhiim u ah gabowga.
Cimriga unuggu wuu dhammaadaa oo unuggu wuxuu galaa xilliga dareenka marka telomeres -ka unuggu aad ugu gaaban yahay in unuggu awoodo inuu mar dambe kala qaybiyo. Telomeresku way sii gaagaaban yihiin marka unuggu kala qaybsamo ugu dambayntiina wuxuu gaaraa cabbir aad u yar si uu u oggolaado qaybinta unugyo dheeri ah, taasoo horseedaysa aamusnaanta telomere. Intaas ka dib, unuggu ma qaybin karo oo aakhirka wuu dhiman doonaa. Gaabinta Telomere waa astaan ​​muhiim u ah gabowga oo si fiican loo baaray loona baaray si loo horumariyo xeryahooda kahortagga gabowga. Spermidine waxaa laga helaa jirka waxayna mas'uul ka tahay inay ka soo horjeedo saameynta aamusnaanta telomere, taasoo u oggolaanaysa unugyada inay si xor ah u qeybsadaan muddo dheer.
Spermidine waxay hagaajisaa shaqooyinka mitokondrial waxayna yaraysaa saamaynta walaaca oksaydhka ee jirka. Tani waa astaanta kale ee gabowga oo laga soo horjeesan karo iyadoo la adeegsanayo kaabayaasha budada shahwada ee cuntada.
· Wuxuu ka hortagaa Noocyada Kansarka qaarkood inay soo baxaan
Spermidine waxaa la rumeysan yahay in ay leedahay saamayn anti-neoplastic maadaama la ogaaday in shaqsiyaadka qaata spermidine ay hoos u dhacday halista ah inuu ku dhaco kansarka hepatocellular iyo xaaladdiisii ​​hore, beerka fibrosis. Cilmi -baaris dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in spermidine ay awood u leedahay inay joojiso fibrosis -ka beerka inuu ka soo baxo xitaa qaababka xayawaanka oo si firfircoon loogu soo bandhigay kiimikooyin awood u leh inay soo saaraan fibrosis beerka.
Daraasad indho -indhayn ah ayaa lagu ogaaday in isticmaalka shahwada ay awood u leedahay inay ka hortagto kansarka mindhicirka, inkasta oo loo baahan yahay in la sameeyo baaritaan dheeraad ah ka hor inta aan lagu darin tilmaamaha daaweynta iyo ka -hortagga.
Waxaa intaa dheer, waxaa la ogaaday in adeegsiga spermidine ee bukaannada kiimoteraabiga ee lagu daaweynayo kansarka maqaarka iyo kansarka caloosha ay gacan ka geysatay hagaajinta natiijooyinka daaweynta iyo hagaajinta arrimaha saadaalinta kansarka.
· Ilaali Laxanka Wareegga ee habboon
Kaabisyada Spermidine waxaa badiyaa lagu xayeysiiyaa hurdo bilaabista iyo dayactirka badeecadaha iyadoo sidoo kale xoogga la saarayo hagaajinta garaaca wareegga. Daraasad lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka ayaa lagu ogaaday in jiirarka waayeelka ah, oo leh heerar hoose oo shahwada ah oo jirkooda ah, ay leeyihiin qunyar socod wareeg ah oo inta badan u kobca sida cilado hurdo. Marka lagu daro budada shahwada, jiirarkan ka weyn ayaa la ogaaday inay leeyihiin garaacis wareeg oo firfircoon oo leh wareegga wareegga caadiga ah.
· Qurxinta Timaha, Cidiyaha, iyo Maqaarka
Spermidine waxay dib -u -cusboonaysiisaa unugyada waxayna kor u qaaddaa koritaanka unug caafimaad qaba taas oo dib u celisa saamaynta gabowga ee maqaarka, timaha, iyo ciddiyaha. Gabowgu wuxuu waxyeello u geystaa muuqaalka maqaar -ka maqaarka, iyadoo maqaarka gabowgu u muuqdo mid duuduubmay oo la jilacsan qaab -dhismeed. Saameyntan waa la beddeli karaa iyadoo la adeegsanayo kaabisyada spermidine oo si firfircoon loogu talinayo qurxinta timaha, ciddiyaha, iyo maqaarka.
Cuntooyin noocee ah ayaa hodan ku ah budada Spermidine?
Spermidine waxaa si dabiici ah looga helaa ilaha cuntada badankood, inta badan kuwa iska leh cunnada Mediterranean -ka. Ilaha cuntada ee spermidine ayaa hoos lagu xusay:
Chees (noocyo kala duwan ayaa leh waxyaalo spermidine kala duwan ah)
Jeermiska Qamadiga waa il muhiim u ah spermidine, kaas oo lagu kaydiyo ilma -galeenkeeda. Muhiimada ilaha cuntada ee spermidine waa in inta badan loo adeegsado soo saarista dheecaannada spermidine oo ah isha xarunta.
Waa maxay Spermidine Sareenka Qamadiga?
Spermidine oo ah kabitaan cunto ayaa laga soo qaatay jeermiska qamadiga oo hodan ku ah shahwada. Si waxsoosaarkan looga soo saaro geedka sarreenka, qamadi qamadi ah ayaa la daweeyaa si ay shahwaddiisa uga soo saarto endospore. Soosaarka garaamyada qamadiga ah ee la qallajiyey ayaa la soo saaraa iyada oo lagu daweeyo soosaarka ka soo baxa qamadiga qamadi. Waxa kale oo loo yaqaan 'Fermented Extract of Wheat Germ', FWGE, MSC, Triticum Aestivum Germ Extract, iyo Triticum Vulgare Germ Extract, badeecadani waa waxa bixiya spermidine kaabayaasha cuntada oo leh spermidine.
Isticmaalka Soo -Bixinta Jeermiska Qamadiga Spermidine
Soosaarka jeermiska qamadiga spermidine waxaa lagula talinayaa dadka doonaya inay ka noqdaan saamaynta gabowga jidhkooda, sida cirrada timaha, duudduubnaanta maqaarka, iyo soosaarka tamarta oo yaraata. Qaar ka mid ah adeegsiga kale ee FGWE waxaa ka mid ah:
Sunburns: Maadaama spermidine ay awood u leedahay inay kor u qaaddo koritaanka unugyada, kordhinta, iyo dib -u -nooleynta, waxaa la rumeysan yahay in unugyada ay waxyeeleeyeen soo -gaadhista UV ay ka faa'iidaysan karaan saamaynta spermidine. Unugyadan waxaa loo malaynayaa inay marayaan hab autophagic ah oo ka dhalatay isticmaalka shahwada, taas oo markaa horseedi doonta in unugyo cusub la soo saaro si loo daweeyo gubashada qorraxda.
Ka -hortagga qandhada bukaanka kiimoterabi: spermidine waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa hab -dhiska difaaca iyada oo loo marayo astaamaheeda autophagic, waana astaamahaas oo ka caawiya spermidine jeermiska qamadiga inuu soo saaro budada si kor loogu qaado burburka unugyada waxyeellada leh ee kiimoteraabiga oo kiciya taranka unugyada cusub. Tani waxay gacan ka geysaneysaa dib -u -soo -nooleynta unugyada T -ga caafimaad iyo shaqaynaya ee jirka ka caawiya bukaannadan inay la dagaallamaan caabuqyada soo noqnoqda.
Maareynta cudurrada is-difaaca jirka: Spermidine waxay leedahay astaamo ka-hortagga bararka kuwaas oo gacan ka geysanaya maareynta jirrooyinka difaaca jirka oo leh astaamo caabuq leh.
Soosaarka jeermiga qamadiga spermidine waxaa inta badan adeegsada bukaanka kansarka maadaama loo malaynayo in la joojiyo horumarka kansarka isla markaana la joojiyo koritaankiisa. Waxaa intaa dheer, waxaa la rumeysan yahay in isticmaalka maalinlaha ah ee kaabista spermidine ee cuntada ay faa'iido u leedahay ka hortagga horumarinta kansarka meesha ugu horeysa, waxayna beddeli kartaa saameynta kansarka iyadoo sidoo kale maareynaysa saameynta xun ee daaweynta kansarka.
Saamaynta Ay Leedahay Isticmaalka budada Spermidine
Spermidine waa polyamine oo si dabiici ah looga helo jirka, xad -dhaafkiisuna wax saameyn ah kuma laha jirka aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, heerarka hoose ee spermidine ee jirka waxay la xiriiraan gabowga hore, xusuusta oo yaraata iyo shaqada garashada, oo ay weheliso xasilloonida qaab dhismeedka iyo daacadnimada maqaarka. Waxa kale oo ay keentaa hawl -qabad mitochondrial oo markaa buunbuuniya saamaynta gabowga ee jirka.
Kaabisyada Spermidine ee la soo saaray iyadoo la isticmaalayo soosaarka jeermiska qamadiga oo tayo sare leh iyo iyadoo la raacayo dhammaan tilmaamaha amniga iyo hab -maamuuska oo loo arko inay badbaado u tahay isticmaalka aadanaha. Kaabisyadan si fiican ayaa loo darsay mana jiraan wax saameyn ah oo la taaban karo oo weli la helay, sidaa darteed waxay ku baaqeysaa in la sameeyo baaritaan dheeri ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in aan weli la soo sheegin sunta budada spermidine
Maxaad u Dooratay Warshaddii Warshadaynta Budada Spermidine?
Budada Spermidine waa isku -dhafan deggan oo sidoo kale laga helo jirka. Warshadeena wax -soo -saarka, budada shahwada waxaa lagu soo saaraa xirfadle, shaybaar madhalays ah si loo hubiyo badbaadada alaabta. Badeecada waxaa la soo saaray iyadoo la raacayo tilmaamaha iyo qawaaniinta amniga si loo hubiyo faa'iidooyinka ugu sarreeya ee xawada xawada iyadoo sidoo kale la yareynayo suurtagalnimada faddarayn ama falcelinta xarunta ee alaabada kale. Waxaa intaa dheer, badeecadaha ayaa shaybaar lagu tijaabiyaa wax soo saarka kadib si loo hubiyo amnigooda, waxtarkooda iyo awoodooda. Shey kasta oo shahwada ah oo aan dhaafin imtixaankan ma aha mid baakadeysan oo diyaar u ah iibin laakiin halkii dib ayaa loo soo celin doonaa, iyo alaabooyinka kale ee isku dufanka ah waxaa la siiyaa tababar ballaaran si loo hubiyo inaysan wax dhibaato ah ku qabin tayada budada shahwada.
Budada Spermidine waxaa laga helaa jumlada warshadeena, in kasta oo loo iibinayo ujeeddooyin cilmi baaris iyo horumarin, ama dalabkeeda xagga dawooyinka. Spermidine waa meel dhexe oo dawada ah iyo substrate muhiim u ah kiimikada dawada iyo bayoolojiga. Ujeedooyinkaas awgeed, budada Spermidine oo tayo sare leh ayaa loo baahan yahay, oo laga heli karo warshadeena wax soo saarka Spermidine.
Budada Spermidine ee laga helo xarumaheena wax -soo -saarka ayaa diyaar u ah in lagu iibsado baakado iyo xaalado kala duwan, iyadoo ku xiran baahida macaamiisha. Baakad kasta waxay leedahay sumad leh taariikhda imtixaanka iyo taariikhda wax -soo -saarka, si loo hubiyo hubinta tayada tayada iyo adeegyada raadraaca.
Mortimer RK, Johnston JR (1959). "Noolaha nolosha ee unugyada khamiirka shaqsiyeed". Dabeecadda 183 (4677): 1751–1752. Bibcode: 1959Natur.183.1751M. doi: 10.1038 / 1831751a0. hdl: 2027 / mdp.39015078535278. PMID 13666896
Daawada tijaabada ah ee lagu bar tilmaameedsanayo cudurka Alzheimer ayaa muujineysa saameynta gabowga ”(War-saxaafadeed). Machadka Salk. 12 Nofeembar 2015. Waxaa dib loo helay November 13, 2015.
Baarayaasha waxay tilmaamayaan bartilmaameedka jirka ee J147, kaasoo ku dhow tijaabooyin caafimaad si loo daweeyo cudurka Alzheimers ”. Dib loo soo ceshay 2018-01-30.
Xiriirinta Cudurka Alzheimer Cudurka Neuropathologic Isbedelada Xaaladda Garashada: Dib u eegista suugaanta Peter T. Nelson, Irina Alafuzoff, Eileen H. Bigio, Constantin Bouras, Heiko Braak, Nigel J. Cairns, Rudolph J. Castellani, Barbara J. Crain, Peter Davies, Kelly Del Tredici, Charles Duyckaerts, Matthew P. Frosch, Vahram Haroutunian, Patrick R. Hof, Christine M. Hulette, Bradley T. Hyman, Takeshi Iwatsubo, Kurt A. Jellinger, Gregory A. Jicha, Enikö Kövari, Walter A Kukull, James B. Leverenz, Seth Love, Ian R. Mackenzie, David M. Mann, Eliezer Masliah, Ann C. McKee, Thomas J. Montine, John C. Morris, Julie A. Schneider, Joshua A. Sonnen, Dietmar. R. Thal, John Q. Trojanowski, Juan C. Troncoso, Thomas Wisniewski, Randall L. Woltjer, Thomas G. Beach J Neuropathol Exp Neurol. Qoraal gacmeed; waxaa laga heli karaa PMC 2013 Jan 30. La daabacay foomkii ugu dambeeyay ee la saxariyay sida: J Neuropathol Exp Neurol. 2012 Meey; 71 (5): 362-381. doi: 10.1097 / NEN.0b013e31825018f7
Bogga ugu weyn blog Nala soo xiriir Nagu saabsan Products Our